Sefafi : “Tafahoatra ny tsy firaharahana ny mpiray tanindrazana” (NewsMada) | AEMW
Sefafi : “Tafahoatra ny tsy firaharahana ny mpiray tanindrazana” (NewsMada)
Namoaka fanambarana, toy ny fanaony ny eo anivon’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi) ny 20 aogositra teo ary nampitondrainy ny lohateny : “Ny fahefana hiasa ho an’iza ?”. Namelively ny mpitondra sy ny mpanohitra izy ireo ary nitondra vahaolana koa.
Nahitsy tanteraka. “Tsy hain’ny mpitondra ny nandray ny fepetra mifandraika amin’ny zava-misy. Tsy vitany ny niezaka hamaha faran’ny haingana ny raharaha tena mampivarahontsana, hany ka niteraka fihetsika tsy mandeha amin’ny laoniny sady manala baràka izany. Arantiranty ho hitan’ny vahoaka milona ao anatin’ny fahoriana ny fomba fiainana mahamenatra sy mihantsy. Porofo izany fa tafahoatra loatra ny tsy firaharahana ny mpiray tanindrazana, tena fanivaivana tsy hay zakaina mihitsy aza no atao azy”, hoy ny fanambaran’ny Sefafi. Notanisain’izy ireo ho anisan’izany ny fandehanana an-kisesy amin’ny fiaramanidina manokana na any amin’ny kilasy voalohany, ny lanonana andaniam-bola be sy ny fitafiana mirenty, ny fanasana tsy an-kijanona any amin’ny hotely faran’ny raitra, ny fitanjozotry ny 4×4 vaovao manjelajelatra, ny fitaratra hamaintisina, ny anjombona atatatata, ary ny mpitandro filaminana manambony tena sy manambany ny mpitondra fiarakodia, manao zinona ny fitsipiky ny fifamoivoizana. “Fanandevozana ny vahoaka tokony hotompoin’izy ireo izany”, hoy ihany ny Sefafi. …Tsy mitsaha-mikorosy fahana ny fari-piainana eto amintsika. Mizaka ny tsy eran’ny aina ny mponina nefa tsy afa-manoatra fa ny mikomy ombieny ombieny amin’ny mpanao politika sisa vahaolana hitany. Mampahantra sy manosihosy azy anefa ireo ary tsy mba mihevi-tena ho diso na oviana na oviana. Efa teo amin’ny fitondrana teo aloha ny mpitondra ankehitriny ary tsy manan-tsaina afa-tsy ny hiverina eo amin’ilay seza nanalana azy ny sasany, araka ny fanambarana ihany… Nametra-panontaniana aza ny Sefafi amin’ny fahasahian’ny tompon’andraikitra mandà imasom-bahoaka fa tsy misy ny fahantrana, nefa ny antontan’isa rehetra na avy eto an-toerana na avy any ivelany, samy mandefa antsika any amin’ny laharan’ny firenena 10 faran’ny mahantra indrindra eto an-tany ? Nahoana no mbola ihambahambana ihany ny kere any Atsimo, nefa analiny ny olom-pirenena any isan-taona, miaritra ny ngidin’ny hanoanana ? Nahoana no avela hihombo ny tsy fandriampahalemana miharo vonoana olona, ankoatra ny halatra omby sy ny vonoana olona aterany ?
Hatsangana haingana ny fitsarana hitsara ireo mpitondra
Manoloana izany, manaitra ny rehetra ny Sefafi. “Tonga izao ny fotoana handrefesana ny vita nandritra ny tapany voalohany tamin’ny fe-potoana niasan’ny filohan’ny Repoblika, sady fe-potoana voalohany ho an’ny Repoblika faha-IV. Eo am-piandrasana izany, tsy azo atao ela intsony ny fananganana ny Fitsarana ny olona ambony (HCJ), ny tribonaly misahana ny hazo sarobidy, ary ny tribonaly miady amin’ny kolikoly, tsy mitanila, hahaleo tena ary ho afaka hanao fanadihadiana momba ny raharaha rehetra. Hatomboka amin’ny fanasaziana ireo mpanao kolikoly efa fanta-bahoaka izany”, hoy ny fanambarana. Voavely kanonta manokana tamin’izany koa ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. “Tsy maintsy lavina ny fomba fiasa natolotr’io minisitera io, mba hamongorana hatramin’ny fakany ny kolikoly, satria andrim-panjakana fahatelo io ary faran’ny mpanao kolikoly, araka ny voalazan’ny Bianco vao tsy ela akory. Mieritreritra ny hampiditra any anaty fandaharam-pianarana ny lesona momba ny fanoherana ny kolikoly. Izany hoe mpampianatra mpanao kolikoly izany no hampianatra io taranja io, ary hiantoka ny fampiharana azy ny mpiasa ambony ao amin’ny minisitera”, hoy ny Sefafi.
Tsy levon’ny vavon’izy ireo koa ny nandaniana ilay lalàn’ny fifandraisana ka nitsikerany ny depiote 18 monja amin’ny 151 nandany ilay lalàna tsy vanombanona. “Hita miharihary izao fa manitsakitsaka ny fahafahana fototra, nefa afaka soa aman-tsara amin’ny fitiliana na manaraka ny lalàmpanorenana na tsia, ary efa havoakan’ny filohan’ny Repoblika ho manan-kery tsy ho ela ”, hoy izy ireo.
Mpitondra manao bemarenina
Etsy andaniny, nambaran’ny Sefafi fa tena mampatahotra ny toe-draharaha ankehitriny. “Mitombo isa ny lakolosy fampitandremana, avy amin’ny fiarahamonim-pirenena… Na izany aza, moa ve mbola tokony hiverina hanao Tetezamita vaovao indray, hiantso fiaraha-midini-pirenena, tsy mahasolo tena akory ny mponina sady miharihary fa fitaovam-piasana fotsiny toy ny teo aloha ihany, ary hanao tefy maika ny lalàmpanorenana vaovao ? Ireny tolo-kevitra avy amin’ny mpanao politika efa nailika na avy amin’ny matim-boninahitra tsy sahy miseho masoandro ireny, tsy hahavaha na inona na inona…”, hoy izy ireo. Notsiahivin’ny fanambarana fa efa 15 taona namotsipotsitra ny mikorontana sy ny tsy mandeha amin’ny laoniny eo amin’ny fitantanana ny firenena ny Sefafi. Mbola mikiry biby hatrany anefa ireo mpitondra nifandimby tsy niraharaha ny torohevitra sy ny fampitandremana, araka ny fanambarana ihany.
← Quête politique (NewsMada)
Sainte Marie : miditra an-tsehatra momba ireo vazaha roa maty ny Frantsay (NewsMada) →